Ihotele enkulu yaseIdaho Potato 🥔
Ifama sinombuki zindwendwe onguKristie
Ukuba uyayithanda imvakalelo ethambileyo oyifumanayo xa usitya iitapile zase-Idaho, uya kukuthanda ukuhlala kwitapile enkulu ejike ipholile, ukubaleka kwabantu ababini abadala!
Ihlaziywe kwakhona ukusuka kwiKomishoni yePotato ye-Idaho ye-Big Idaho Potato Tour, le etapile yeetoni ezi-6 ihambe ngasemva kwisiqingatha ukuya (48) imimandla iminyaka esixhenxe. Ngoku iphumle kuma-400 eehektare zefama ye-Idaho elungileyo, emazantsi edolophu yaseBoise, le hotele iyilwe ngobuchule nguKristie Wolfe, owayesakuba sisithethi seBig Idaho Potato Tour, ukuvumela intuthuzelo yabucala enesitayile kunye nezinto eziluncedo ezifana nezixhobo zombane izixhobo zombane, ifriji encinci, iirekhodi ezindala zokudlala kunye nebhedi eyakhelwe ngokwesiko.
Kukwakho ne-silo eyenziwe ngokwezifiso eguqulwe yaba yindawo yokubuyela ye-spa elungele ukuntywila ngelixa ujonge phezulu ezinkwenkwezini. Ukufumana idosi eyongezelelweyo yokuthandeka, Ihotele enkulu ye-Idaho Potato iza neyona nkomo yejezi intle ehlabathini eya kuba sisilo-qabane sakho esifuzekileyo xa uhlala.
4.90 ·Izimvo eziyi-422
4.90 · Izimvo eziyi-422
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi422
Ihotele yePotato ijikelezwe ziihektare ezingama-400 zomhlaba wasefama. I-Union Pacific Railroad ihamba kwicala lasekunene likahola wendlela. Ekuphela kwento edlulileyo kuthi liziko loqeqesho loMlindi weSizwe elibamba amajoni avela kwilizwe lonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Kristie
Izimvo eziyi-2 372